Muhiimadda Mawduucyada SEO: Tilmaanta Faahfaahinta Ee Uu Qoro Semalt
Sida loo abuuro waxa ku habboon loogu talagalay matoorada raadinta
Bogag badan ayaa doonaya in lagu liis galiyo boggaga Google TOP 100. Qaar badan oo ka mid ah websaydhadan ayaa iskudayaya inay ugu fiicnaadaan boggaggooda qalabka mashiinka raadinta. Tiro aad u yar oo iyaga ka mid ah ayaa runtii fahamsan muhiimada ay leedahay maaddada SEO.
Marka la eego darajaynta sare ee weydiimaha baarista, waxyaabaha ka kooban websaydhkaaga waxaa loo barbar dhigi karaa mashiinka gaarigaaga. Gaarigaagu ma dhaqaajin doono hal inji la'aan matoor, sidoo kale shabakadaada kuma horumarin doonto darajooyin la'aan waxyaabaha aan fiicnayn.
Marka nuxurkaagu yahay tayo sare isla markaana xeeladahaaga kale ee SEO-ga ay sarreeyaan, waqti aan la gaarin, websaydhkaagu wuxuu noqon doonaa kan ugu sarreeya qiimeynta mashiinnada raadinta. Dhanka kale waa kiiska hadii waxyaabahaaga iyo istiraatiijiyadahaaga SEO ay liitaan - waxay u horseedi karaan ciqaab ka yimaada Google. Mar haddii degel uu ku dhufto rigoore Google, sida caadiga ah aad ayey u adag tahay inay ka soo kabtaan.
Semalt ujeedadiisu waa inuu kaa caawiyo sidii aad u fahmi lahayd qiimaha waxa ku jira SEO, waxa waxa run ahaantiisu tahay, sida loo abuuro waxyaabo la xoojiyey iyo wax kasta oo aad sameyn karto si loo hubiyo in waxaaga iyo istiraatiijiyadyada SEO ay gacanta ugu hayaan gacantooda si ay kuu siiso meel sare meesha raadinta. weydiimaha mashiinka.
Aynu sahamino adduunka waxyaabaha ku jira iyo SEO.
Heerka aasaasiga ah, nuxurka ayaa ah si fudud macluumaadka dijitaalka (qoraalka, muuqaalka, fiidiyaha, maqalka) websaydhka oo loogu talagalay iftiinka, madadaalada ama u wargalinta booqdayaashaada.
Sidee ayey muhiim u tahay waxyaabaha ku jira SEO?
In ka badan 3.5 bilyan oo weydiimaha raadinta waxaa maalin walba lagu sameeyaa Google. Iyaga oo isku dayaya in ay adeegsadaan isticmaaleyaasheeda, Google waxay sii wadaa cusbooneysiinta aaladaha algorithms-ka si ay u hubiso inay keenaan "natiijooyin waxtar leh oo laxiriira" waqtiga ugu gaaban ee suurogalka ah.
Natiijooyinka waxtar leh iyo kuwa laxiriira duruufta jirta ayaa ah waxa ka kooban websaydhyada internetka oo dhan. Ka dib waxaa loo kala saaraa si faa'iido leh iyo u habboonaan ah isticmaalaha samaynta raadinta.
Tani waxay muujineysaa in waxyaabahaaga ay tahay inay Google ugu maleeyaan inuu adeegsado ka hor inta aan la soo jarin.
Si kor loogu qaado suurtagalnimada qiimaha SEO ee maaddadaada, waxaa jira astaamo u gaar ah waxyaabaha ay ka kooban tahay inuu lahaado. Waxay ka mid yihiin:
1. Waa inay noqotaa mid waxtar leh oo wargelinaysa: Haddii aad leedahay degel shabakad meheraddaada ah, waa inaad ku dartaa meesha, macluumaadka lala xiriirayo, badeecadaha / adeegyada la fidiyay, iyo saacadaha shaqada. Haddii aad awoodid, ku dar blog si macaamiishaadu ugu cusboonaysiiyaan waxyaabaha ugu dambeeyay ganacsigaaga.
2. Waa inay noqotaa mid ka qiimo badan kana faa iido badan bogagga kale ee internetka isku midka ah: Hadaad wax ka qorto iskaa wax u qabso, tusaale ahaan, hubso in qoraaladaadu bixiyaan macluumaad fiican ama aragti ka duwan iscaawinta marka loo eego kumanaan kun oo Maqaallada ayaa maalin walba ka soo baxa isla mawduuca isla.
3. Waa inay noqotaa mid lagu kalsoonaan karo: Aaminaada boggaaga ayaa la kobcin karaa haddii aad u isticmaasho cilmi baaris asal ah, tixraacyo, iyo xiriiriyeyaal boggaaga. Qoraaga taariikh nololeed qoraaga, dib u eegisyo, iyo marqaatiyo laga helo macaamiisha nolosha dhabta ah ayaa waliba si weyn u horumarin doona aaminnimadaada.
4. Waa inay ahaato mid tayo sare leh: Hubso in waxa kujira bartaada ay tahay mid gaar ah, oo toos ugu socota barta iyo tayada sare ee tayada sare leh. Iska ilaali khayaanada qiimayaasha oo dhan.
5. Waa inay noqotaa mid ku mashquulsan: Soo qaado websaydhka nolosha adoo kudareynaya sawirro iyo fiidiyowyo tayo leh. Ha u jeedin booqdayaashaada inay ku mashquulaan higgaadinta xarfaha, hufnaanta ama khaladaadka dhabta ah. Ka fogow xayeysiisyo fara badan sidoo kale. Ka ilaali booqdayaashaada inay kaqaybqaataan adoo si joogto ah u cusbooneysiinaya. Waxa kale oo aad ku hayn kartaa bartaada dhexdeeda muddo dheer adoo u maraya sanduuqyada faallooyinka iyo / ama astayaasha warbaahinta bulshada.
Sida loo Sameeyo Mawduuc Ay Ugu Talo Galay Qalabka Raadinta
Si loo abuuro waxa ku habboon, waxaa jira dhowr tillaabo oo ay tahay in la raaco.
Kahor Abuurista Qoraalka
1. Samee cilmi baarista ereyga furaha: Natiijooyinka ugufiican, waxaad ubaahantahay inaad ogaato waxa ereyada furaha ee sida ugu badan loogu raadinayo dhagaystayaasha aad rabto. Aalad cilmi baaris oo muhiim ah oo la isku halleyn karo oo la mid ah tan Semalt ay bixiso waxay noqon doontaa faa iido weyn in tan la sameeyo.
2. Dooro mawduucaaga iyo ereyada furaha ah ee taageeraya: Waa muhiim inaad sameyso cilmi-baaris keyword marka hore si waxyaabahaaga ka soo baxa laga heli karo mashiinnada raadinta. Baadhitaankaaga, ka go'aan mawduuc ku habboon waxyaabaha aad ka kooban tahay. Hubso inaad diirada saarto ereyada furaha-dheer. Sidoo kale, iska ilaali ereyada muhiimka ah ee tartanka kula jira tiro badan oo baaritaan ah.
3. Ku habee qaab-dhismeedkaaga iyo qaab-dhismeedkaaga si aad wax u akhrin karto: Goobo badan ayaa u dagaallamaya u soo jiidashada booqde kasta ee ku yaal boggaaga internetka. Marka waa inaad ku dadaashaa inaad ka ilaaliso inay ka dhex muuqato waxa ku jira. Hal hab oo tan loo sameeyo ayaa ah in qaab ka sameysigaaga loo sameeyo qaab akhris fudud.
Hoos waxaa ku yaal talo bixinno adiga ku caawin kara:
a . Ujeexi waxyaabahaaga googooyo yaryar. Baaragaraafka waaweyn waxay cabsi geliyaan booqdayaal badan. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo qiyaastii 2-3 jumlad hal sadar.
b . In alla intii suurogal ah, gal cinwaan hoosaadyo iyo / ama sawirro wixii ka dambeeya 200-300 erey si aad uga sii jebiso nuxurkaaga.
4. Gali xiriir-wadaag (backlinks) ku jira nuxurkaaga: Sida ugu kalsoonida badan ee boggaagu yahay, ayaa sare u kaca. Markaad ereyada qaarkood ku xidho websaydh laxiriira oo awood leh, matoorada raadinta waxay mowduucyadaada aaminaan yihiin. Natiijooyinka ugufiican, xaddid ereyada ku xirkaaga 6 ama ka yar.
5. Ku dheji mawduucaaga iyo bartilmaameedkaaga bartilmaameedka: Haddii aad rabto inaad abuurto waxyaabaha ugu waxtar badan uguna habboon ee mawduucaagu ka kooban yahay, waa muhiim in aad ku dhejiso mawduucaaga. Sidookale haku dayin inaad bartilmaamed ka dhigto ereyaal badan. Hubso inaad diirada saarto mowduucaaga iyo ereyada furaha ah ee taageera.
Kadib markaad abuurto waxyaabahaaga
1. Kobcinta URL-gaaga: Waa cinwaanka boggaaga websaydhka toos loogu diro natiijada natiijada raadinta. Qaabka uu u qaabeeysan yahay URLkaaga ayaa go'aamin kara heerkaaga-guji. Haddii URLkaagu aad u dheer yahay ama u eg yahay wax aan muuqan, waxay ka cabsiin kartaa dadka isticmaala raadinta inay gujistaan bartaada internetka. Waa muhiim in URLkaaga la akhrin karo maaddaama u-kala-soo-guuriyeyaasha si aan toos ahayn u saameynayaan heerkaaga.
2. Hagaaji sumaddaada cinwaanka: Magaca sumadda waa cinwaanka la gujin karo ee toos looga arki karo URL-ka. Tayada sumaddaada cinwaanka waxay ka dhigi kartaa isticmaale raba inuu riixo bartaada ama iska ilow. Astaamaha cinwaanka ayaa waliba ka caawiya matoorada raadinta inay fahmaan waxa boggaagu ku saabsan yahay.
Waa kuwan tabaha qaar kaa caawin kara inaad kor u qaaddo sumaddaada magaca:
a. U oggolow sumadda cinwaanka inay si toos ah u sheegto waxa nuxurka bogga ku saabsan yahay.
b. Magaca sumadda waa inuu ahaadaa 60 xarago ama ka yar.
c. Dhig eraygaaga furaha ah bilowga.
d. Isku day inaadan ku soo darin ereyo-fureyaal fara badan cinwaanka.
3. Kor u qaad sharaxaadaaga meta: Sharaxaadda meta waa qoraal gaaban oo qoraal ah oo ka socda boggaaga oo ka muuqda cinwaanka URL iyo cinwaanka cinwaanka. Waxyaabaha yar ee lagu arko sharaxaadaaga meta ayaa sidoo kale saameyn ku leh heerkaaga-sida-loo-arko iyada oo waxa halkaas ka arimaya isticmaaleyaashu ay go'aamin doonaan inay gujin doonaan bartaada internetka ama ay sii wadeegayaan. Halkan waxaa ku yaal talo bixin kaa caawin kara kor u qaadista tafaasiishaada meta:
a. Xaqiiji in tilmaanta meta ay tahay dulmar guud oo gaar ah oo ka kooban waxyaabaha guud.
b. Hubso in tilmaanta meta ay ka kooban tahay wax ka yar 160 xaraf.
c. Dhex dhig ereyada muhiimka ah ee ku yaal sharaxaadda meta (waxaa lagu muujin doonaa natiijooyinka raadinta).
Sidee Semalt caawin karaa
Tani waxay dhamaan u muuqan kartaa farsamo waxayna u ekaan kartaa shaqo weyn. Tani waa sababta Semalt ay u abuurtay qorshe kor u qaadis ah oo ku saabsan ganacsigaaga. Nuxurka abuuritaanka waxyaabo muhiim ah meesha ugu horeysa ayaa ah in la wanaajiyo qiimeyntaada makiinadaha raadinta taas oo, taas badalkeed, u horseedi doonta guul ganacsiaga.
Semalt wuxuu kaa saarayaa walaaca wuxuuna ka dhigayaa ganacsigaaga internetka mid guuleysta.
Waxay bixiyaan badeecado iyo adeegyo cajiib ah si loo hubiyo in shabakadahaaga ay si heer sare ah u qiimeeyaan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
1. AutoSEO: Semalt's AutoSEO wuxuu ballan qaadayaa natiijooyin aad u wanaagsan muddooyin gaagaaban. Xirmadan SEO waxay soo gudbineysaa: hagaajinta aragtida websaydh; kor u qaadista bogga; isku xirka dhismaha; cilmi baarista ereyga; iyo warbixinnada falanqaynta shabakadda. Riix halkan si aad u bilowdo.
2. SEO oo Dhameystiran: Tani waxay ku lug leedahay dhowr heer sare ah oo farsamooyin SEO ah oo loogu talagalay natiijooyin aad ufiican. Semalt's SEO dhameystiran wuxuu bixiyaa: kobcinta gudaha; sixitaanka qaladka shabakadda; qorista nuxurka; xiriirinta dakhliga; taageero iyo tashi. Ka faa'iidayso Semalt's SEO ee buuxa halkan .
3. Falanqaynta shabakadda: Qalabka falanqaynta ee Semalt websaydhku wuxuu daaha ka qaadaa habka ugu gaaban Google TOP10. Qalabkani wuxuu ka caawiyaa hubinta qiimeynta boggaaga; shaaca ka qaadista aragtida bartaada internetka; sahaminta websaydhyada la tartamaya; cadeeyaan khaladaadka kobcinta bogga; oo ay kuugu gudbiyaan warbixinno dhammaystiran oo ku saabsan qiimaynta shabakadda. Waxaad hadda heli kartaa warbixinno lafagurid ah oo bilaash ah internetka .
4. Kobcinta Websaydhka: Sahammada koowaad ayaa muhiim ka ah khadka tooska ah iyo sidoo kale xaaladaha nolosha dhabta ah. Muuqaal soo jiidasho leh ayaa ka caawiya sidii loo heli lahaa macaamiil badan. Semalt wuxuu hubiyaa boggagaaga inuu yahay mid soo jiidasho leh isla markaana isticmaale u leh macaamiishaada. Soosaarayaasha shabakada xirfadleyda ah ee Semalt waxay bixiyaan: qaabeyn websaydh soo jiidasho leh oo shaqeynaya; nidaamyada maaraynta maareynta waxyaabaha; aragtida kordhay; isku-dhafnaanta kombuyuutarrada jilicsan iyo API; Kobcinta ganacsiga elektaroonigga ah; taageero iyo dayactir.
5. Soosaarida fiidiyowga: Waxay caawineysaa macaamiishooda u soo gudbinta waxyaabo qoraal ah oo qoraal ah, Semalt wuxuu sidoo kale ka dhigaa waxyaabaha fiidiyowga firaaqada leh inay kaa sii fogaadaan ka hor tartanka.
Waxyaabaha ku jira ayaa ah boqorka in lagu wanaajiyo mashiinka raadinta. Nuxurkaagu wuxuu leeyahay awood uu ku sameeyo ganacsigaaga ama ku jebiyo. Iyada oo la adeegsanayo fahamka halkaan lagu soo uruuriyay, waxaad si guul leh u abuuri kartaa waxyaabo ku mashquulsan ama weli si ka sii wanaagsan ku dhex jira, uga tag gacanta ugu fiican ganacsiga SEO - Semalt.